Cheta m? Kuki weebụsaịtị
Tọzdee, Septemba 16, 2010 Tuesday, April 1, 2014 Nick carter
Enwere m egwu na aha. Ọ bụrụ na m ga-etinye kuki gị na ụbụrụ m oge ọ bụla m hụrụ gị n'ihu ọha, ọ ga-echeta. Echere m na nke ahụ bụ otu ụzọ kọmputa si nwee ọgụgụ isi karịa ụmụ mmadụ. Ma, n'ihi adịghị ike m nke na-egbuke egbuke, enwere m obi ụtọ mgbe ndị ọzọ nwere ike icheta m ngwa ngwa mgbe m nwesịrị ohere. Ọ bụ nkà. You maara ihe ọ masịghị m: mgbe ndi mmadu na-agha ya. Nke a bụ ihe a na-ahụkarị na chọọchị m, ebe onye ọ bụla na-ebu akara mkpado. N'ezie, na mmadụ 700 na-abịa, enwere obere nlele dị n'obi m tupu ịmaliteghachi anya gị wee sị, "Ndewo, Nick!" na-achịkwa ọchị. Enweghị m isi.
Ugbu a, site na mbido ebum n'uche nke uche mmadụ, ọ bụ ihe ngọpụ zuru oke na ndị ọgbakọ anyị anaghị echeta aha m. Yabụ kedu ihe na-agaghị ekwe ngọpụ? Mgbe kọmputa enweghị ike. Nkà na ụzụ dị oke mfe iji cheta ndị mmadụ maka weebụsaịtị ịda na ya. Ka o sina dị, ọtụtụ ka na-eme. Ma, ihe ka njọ, ọ bụ n'ezie Ọzọ na-akụda mmụọ mgbe weebụsaịtị enweghị ike icheta m karịa mgbe mmadụ na-enweghị ike.
Nke mbu, were onye obula kachasi nma (ma obu, ma obu ma obu ma obu igha ala) GoDaddy.
Abụ m onye ahịa GoDaddy. Adị m ọtụtụ afọ. Na, lee ka ha si dị mma icheta aha m mgbe m gara. Oge ọ bụla m malitere nnọkọ ọhụrụ na GoDaddy.com, ana m ekele “Nnọọ, Nicholas.” Ọbụna ha na-agwa m na m nwere ngalaba ole na ole na-agwụ, ma na-enye ụfọdụ azụmahịa na (echere m na) ahọpụtara dabere na omume ịzụta m.
Ezi ọrụ… ọ fọrọ nke nta. Ọ bụ eziokwu, ha echetala aha m. Ma, ha anaghị emeso m ihe dị iche iche. Edeela m mkpesa a na GoDaddy: mgbe m gosipụtara, ị na-emeso m dịka m abụghị onye ahịa. Igodo uzo bu ihe mbu ahia. Ọ bụrụ na m chọrọ ị banye na ngalaba m, saịtị m akwadoro, akaụntụ m, wdg, maa ihe m ga-eme: pịa njikọ “ọbụghị gị” wee banye ọzọ. Kedu, n'ụzọ, anaghị egosipụta ụdị nbanye ọhụụ n'otu ibe ahụ. Mba, ọ bụ njikọ dị ndụ na ibe ọhụụ ga-ebu.
Ugbu a, enwere m ike ịghọta mkpa ọ dị ịchebe ozi chọrọ ịbanye. N’ezie, obi dị m ụtọ na ha na-eme. Otú ọ dị, LinkedIn jisiri ike ịchọta ụzọ dị mma iji cheta gị–n'ezie icheta gị – ma ka na-echebe ihe kwesịrị ka echedoro n’azụ nbanye.
Mgbe m rutere na LinkedIn.com, enwere m ike ịhụ ihe niile m na-atụ anya ịhụ na m tụlere na m bụ onye ọrụ edebanyere aha na ha na-echeta m n'ezie. Enwere m ike ịnyagharịa n’enweghị nsogbu. Ọ bụghị ihe ncheta faux. Agbanyeghị, Ọ bụrụ na m nwaa biputere, melite, ma ọ bụ gbanwee data ọ bụla, ha na-egbochi m okwu mkparịta ụka ngwa ngwa, nke na-echeta aha njirimara m n'ezie. Yabụ, naanị otu ubi dị ngwa iji mejupụta, kụrụ ịbanye, m na-aga n'ihu na enweghị nsogbu.
Anọ m na-arụ ọrụ iji nweta ncheta nke ndị ahịa m. Na m saịtị, Anyị na-achụrụ iji cheta ndị ahịa ruo ogologo oge. Lelee igbe na anyị ga-echeta gị log-na nzere gị. Mana, n’oge na-adịbeghị anya amụtara m aghụghọ ọhụrụ n’aka enyi m Mack Earnhardt kwuru ka i wee chọọ iku. Ọ bụrụ na nnọkọ mmadụ gwụrụ, maọbụ ọ bụrụ na ha gaa na njikọ nke chọrọ nbanye na mbụ, tupu ịchụpụ ha na nbanye nbanye, chekwaa oge mgbanwe na ebe ha na-aga. Mgbe ahụ, mgbe ha banyechara nke ọma, a na-ebute ha gaa ebe ha chọrọ ịga. (Daalụ, Mack)
Zọ kachasị mma iji mara otu esi edebe saịtị gị ka ịcheta ndị ọbịa bụ ịbịakarị onye ọbịa. Jiri saịtị ahụ dị ka ndị ahịa gị ga-esi hụ ihe na-arụ ọrụ na ndị anaghị arụ ọrụ. Enweghị m ike iche na ndị ọrụ GoDaddy na-eji weebụsaịtị nke aka ha iji jikwaa ngalaba nke aka ha - ikekwe ihe kpatara usoro mmechuihu ha apụtaghị. LinkedIn, n'aka nke ọzọ, nwere ike ịdị na-arụsi ọrụ ike na ngwa ọrụ ha. You na-eje ije na akpụkpọ ụkwụ nke ndị ahịa gị? Cheta ihe ọ na-adị ka mmadụ ichefuo ya.
Sep 16, 2010 na 12:45 PM
Kpamkpam kwenyere, Nick! Ewezuga ịchọrọ GoDaddy, onye nwere otu n'ime Usoro kachasị ọrụ na ụlọ ọrụ ahụ.
Sep 16, 2010 na 4:33 PM
Ọ bụrụ n’echiche na TOS ha tọgbọrọ, gụọ nke m. Geesh, ọ bụ ihe ijuanya na onye ọ bụla na-azụta n'aka m. (oops, bụ na n'èzí)
Sep 16, 2010 na 6:04 PM
Nsogbu dị na nke ha bụ na ha nwere ike were ngalaba gị na-enweghị akwụkwọ iwu ọ bụla. Gụọ nodaddy.com maka ụfọdụ akụkọ egwu na azụmaahịa funahụrụ ngalaba aha ha n'efu.